Kedu esi enweta backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị nke na-arụ ọrụ maka SEO?
Njikọ inbound (nke abata), ma ọ bụ backlinks, bụ njikọ njikọ ndị ọzọ na-ezo aka na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị.Ma gini mere o ji dị oke mkpa ịghọta otú ị ga-esi nweta backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị? N'ihi na ugbu a, a na-ahụ ndị backlinks n'etiti ihe atọ kachasị mkpa nke Google, dịka ozi ezigara nke ndị isi nchịkwa nke nnukwu ụwa na-achọ tupu afo a apụta. Ewezuga echiche sara mbara nke Nchọpụta Nyocha Search, backlinks nwere ike ịhụ dị ka votes nke obi ike - ọdịnaya gị nwere uru a ma ama. Ya mere enwere ike ịtụkwasị ikikere weebụ niile ma ọ bụ blog. N'ụzọ dị otú a, nchịkọta search engine nke Google na-eme ka ya na-achọpụta PageRank ya - na-atụgharị azụmaa ọ bụla dị na ibe ọ bụla na Intaneti. N'ịghọta mkpa nke njikọ ụlọ na nke dị mma, n'okpuru, m ga-egosi gị otu esi enweta backlinks na weebụsaịtị ma ọ bụ blog nke na-arụ ọrụ maka SEO, n'ikpeazụ - ịchọta onwe gị ebe n'ime top 10 nke nsonaazụ ọchụchọ Google.
Otu esi enweta backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ebumnuche SEO
Mgbe ọ na-abịa n'ịmepụta profaịlụ njikọ enyi SEO, ihe niile gbasara backlinks dị mkpa - malite na onye ọ bụla na-ejikọta gị na ikike nke onwe ha, na njikọ ọ bụla njikọ, yana ụzọ nke ebe ntinye aka na peeji nke. Nke a bụ otu esi enweta backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị - jide n'aka na ị nwetara ihe niile na-atụle isi okwu ndị a:
Ngalaba na-ezigara nwere njikọ ndị na-ezo aka n'ebe ị nọ bụ ma eleghị anya otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'anya Google, mgbe ọ na-abịa na-atụ anya na ị ga-enwetakwa ohere nke njikọta njikọ gị.
Jikọọ ikike inye onyinye - ma na ọkwa nke ọ bụla (gụrụ maka ibe weebụ ọ bụla), ma mgbe e weere ya n'ọtụtụ. Ọ pụtara na ịnweta ezigbo nkwado azụlinks nke nwere oke ikike ga-aka mma, karịa nanị ịkụnye ihe dị ukwuu na ihe ọ bụla ọzọ.
Njide a ma ama apụtaghị na ọ bụ ihe niile banyere mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa ma ọ bụ ndị nkwusa kachasị n'ụwa - ụlọ ọrụ azụmahịa gị ma ọ bụ blog niche nwere ike ịme ọganihu zuru oke.
A na-agụta afọ ole na ole dị ka ihe dị oké mkpa, na-ede na ikikere ikike nke weebụsaịtị banyere backlinks maka nzube SEo. Ma, rịba ama, na ị ghaghi ịbịakwute njikọ na ebe ndị agadi nọ na ngalaba.
Ndabere backlinks dị mkpa abụghị naanị ihe bara uru maka Google, kama ndị na-abịa site n'ebe ndị ziri ezi gụnyere otu mkparịta ụka isiokwu, ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa. N'ezie, enwere azụlink na-adịghị mkpa ka a ga-akọwagharị ya dịka aghụghọ ma ọ bụ ọbụna na - eme ihe ntụgharị - ya mere na ị nwere ike irite onwe gị nnukwu (mgbe ụfọdụ ọbụna irreversible) ogo ụgwọ.
E kwesịghị ileghara ndị dị iche iche anya dị iche iche. Alala azụ inwe njikọ na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ kpamkpam kpam kpam, ikike dị iche iche, ntụkwasị obi, PageRank, na ihe ndị ọzọ metụtara ya. N'ezie, nke ahụ ga-abụ mkpebi kachasị mma ị mere - dị ka Google na-elebara anya azụ azụ dị iche iche dị iche iche, ma eleghị anya ịnakwere ụzọ okike ha Source .